नेपाल आज | दशैंमा खानपिन र जिवन शैली कस्तो हुनुपर्छ ? यस्ता छन् चिकित्सकका सुझाव (भिडियोसहित)
मनलाग्दी खानपिन र अनियमित जिवन शैलीले दशैंपछि धेरै मानिस विरामी परेको पाईन्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु र एसिडका बिमारी बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्ता अधिकांश विरामी अस्पताल नै भर्ना हुनु परेका घटना पनि पर्याप्त छन् ।
खानपिन र जिवन शैलीका कारण उत्पन्न समस्यावाट जोगिन र चाडवाड मनाउनासाथ तत्काल अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने समस्यावाट वच्न त्यस्ता वानी र ब्यवहार सुधार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु वताउँछन् । दशैंमा मान्यजनले दिने ‘दिर्घजिवी र स्वस्थ रहनु’ भन्ने आशिर्वादलाई ब्यवहारमा लागु गर्न दशैंको जिवन शैली हेल्दी वनाउनुपर्ने वेलनेस अस्पतालका संस्थापक डा. जनकवहादुर वस्नेतको सुझाव छ ।
खानपिनका साथै मनोरन्जरका अस्वस्थ माद्यम पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने उनी वताउँछन्। छोटो समयको मनोरन्जनका कारण लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा हानी गर्ने, जिन्दगीभर पछुताउनु पर्ने र जिवन छोटो पार्ने प्रकारका जिवन शैली तथा मनोरन्जनका माद्यम प्रयोग गर्न नहुने उनी वताउँछन् । ‘दशैंमा रमाईलो गर्ने र मिठो खाने हाम्रो परम्परा छ। यसकै कारण स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गरेका उदाहरण पनि प्रसस्त छन्’ डा. वस्नेत भन्छन्–‘अस्वस्थ खानपिन, अनियमित आहार–विहार, हिडडुलका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावीत स्वास्थ्य हानी, दुर्घटनालगायतलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।’
खानपिनमा माछामासु, अलकोहल, स्मोकिङ्गको अत्याधिक प्रयोग तथा जुवातास खेलेर घण्टौ विताउने, नसुत्ने अनि नियमित गर्दै आएका शारीरिक ब्यायामसमेत छोडिदिने कारणले पहिलैदेखि खतारमा रहेका ब्यक्तिमा ब्लडप्रेस, सुगर, कोलस्ट्रोल, युरिक ऐसिडको एट्याक वढ्ने उनको उनको अनुभव छ। सवै थोक अनियमित हुने र दशैंकै समयमा मौसममा पनि परिवर्तन सुरु हुने भएका कारण स्वास्थ्यका हिसावले दशैं÷तिहारमा अत्यन्तै जोखिम हुने उनी वताउँछन् ।
‘मुटु, ब्लडप्रेसर, डाईभिटिज लगायतका रोग खानपीनसँग सम्वन्धित हुन्छन। त्यसैले सकेसम्म माछामासु कम खानुपर्छ। खानै परे फाईवर, साग, सलादको मात्रा वढाउनुपर्छ। मनोरन्जनका नाममा हुने अलकोहल र स्मोक वन्द गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘अरु वेला एक्सरसाईज गरिरहेका ब्यक्तिको पनि यस्तो वेला रुटिङ्ग विग्रिएको हुन्छ। त्यसो गर्नु भएन। एक्सरसाईजलाई जारी राख्नुपर्छ ।’
रातदिन जुवा तास खेल्ने चलनले ढाड दुख्ने, नसा च्यापीने समस्या निम्तिने भएकाले त्यस्ता वानी ब्यवहार समेत सुधार गर्न उनको सुझाव छ। ‘आर्थिक र शारीरिक दुवै समस्या निम्त्याउने अस्वस्थ मनोरञ्जन घटाउनुको विकल्प छैन’ उनले थपे–‘जो रिस्कमा हुनुहुन्छ वा पहिले नै विरामी हुुनुहुन्छ। त्यस्ता ब्यक्तिले झन वढि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
वस्नेतले दशैंका लागि खानपान र जिवनशैलीसँग सम्वन्धित निम्नानुसारका महत्वपुर्ण सुझावहरु दिएका छन्।
मासु पकाउने र खाने तरिका
सेकुवा/पोलेको मासुमा कार्वनको मात्रा वढि हुन्छ। यसले क्यान्सरको खतरा वढाउँछ। त्यसैले सेकुवा/पोलेको मासु नखाने । फ्राई गरेको मासुमा पनि तेलको मात्रा वढि हुने भएकाले त्यस्तो मासु स्वास्थ्यका हिसावले अस्वस्थकर नै मानिन्छ। उसिनेर, ग्रेभी र झोल वनाएर खाएको मासुले तुलनात्मक रुपमा क्षती कम गर्ने वस्नेको भनाई छ ।
‘मासुसँगै सागसब्जि, सलाद, फाईवर, फलफुललमा वढि जोड दिनुपर्छ’ वस्नेतले भने–‘त्यसले मासुको असरलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।’ सकेसम्म मासु भन्दा माछाका परिकारमा जोड दिन उनको सुझाव छ।
दशैंमा खसरी ढालेर लामो समयसम्म खाने चलन छ। सकेसम्म खसीनै ढालेर आफुमात्रै खाने परिपाटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । छरछिमेकीहरुसँग मिलेर पालोपालो खसी काट्ने र वाँडचुड गर्दै खाने तरीका अपनाउन सकियो भने स्वस्थ मासु खान पाउने सम्भावन धेरै छ ।
त्यसो नभए पनि अहिले पहिलाको तुलनामा त्यति ठुलो समस्या छैन । फ्रिजमा राखेर पकाएर खान सकिन्छ। तर, वेलावेलामा फ्रीज पनि चेक गरिरनुपर्छ ।
तेल कस्तो प्रयोग गर्ने ?
वजारका अधिकांश तेल अस्वस्थकर छन्। रिफाईन तेल स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ। कोलस्ट्रोल फ्रि भनेर सन फ्लावर तेल प्रयोग गर्ने चलन छ। तर त्यो मात्र होईन वनस्पतिवाट वन्ने सवै तेल कोलस्ट्रोल फ्रि नै हुन। त्यसैले जुनसुकै व्राण्डका भएपनि सकेसम्म वजारको तेल प्रयोग नगर्नु नै फाईदाजनक हुने उनले वताए । ‘आफैले तयार गरेको तोरीको तेल नै सवैभन्दा राम्रो हुन्छ’ उनले भने–‘सहरमा सम्भवना कम हुन्छ तर, गाउँमा सहज छ।’ यसका साथै, गाईको घ्यु सवै भन्दा राम्रो हुने उनले वताए ।
सकेसम्म जुवा/तास नखेलेकै राम्रो । नखेली नसक्ने हो भने दशैं अगाडि र दशैंपछि फुल वडि सर्भिङ्ग गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यलाई रिस्कमा राख्ने नहुने उनी वताउँछन् । ‘शारीरिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमै क्षती पुर्याउने मनोरन्जनका त्यस्ता माद्यम सकेसम्म परिवर्तन गरेकै राम्रो’ उनले भने–‘तर, त्यो नगरीकन सक्दिन भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने दशैंअघि र पछिको समयमा खानपान, जिवन शैली र वडि सर्भिसिङ्गमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
जमराको सांस्कृतिक महत्व त छ नै। त्यसैले वुझेर होस वा परम्परा धान्ने नाममा हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौ । टिका लगाएर जमरा कानमा लगाई दिने अनि दिर्घजिवी र स्वस्थ हुने आशिर्वाद दिने चलन छ। ‘तर, जमरा कानमा राखेर स्वस्थ्य हुने होईन’ वस्नेत भन्छन्– ‘महत्व चै के हो भने– त्यसलाई खानु पर्छ । खायो भने मात्र दिर्घजिवी र स्वस्थ हुन काम लाग्छ।’
प्राकृतिक चिकित्साले जमराको जुसलाई अमृत रस भन्ने गरेको वताएका उनले त्यसमा भिटामिन ए, सि, इ , एमिनो एसिड, फाईवर, क्लोरोफिल लगायतका कम्पोनेन्टस् पाईने जानकारी दिए । ‘यो त्यसै प्रयोगमा आएको होईन । यसमा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने कुनै पनि चिज छैन’ उनले भने–‘मान्यजनको आशिर्वादलाई अझै फलदायी वनाउने हो भने जमरालाई उपयोग गर्नु पर्छ । त्यसलाई खानुपर्छ ।’
दशैंमा खानपिन र जिवन शैलीका विषयमा वेलनेस अस्पतालका संस्थापक डा. जनकवहादुर वस्नेतसँग नेपाल आजले गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस।
विरगञ्जमा लक्षित समुहले खोप पाएनन्, जनप्रतिनिधिका आफन्तलाई फालाफाल